Pakistana: Blog-o-rama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2018 7:12 GMT
Manana valinteny somary angolangolaina sy feno hatezerana manoloana ireo fanehoan-kevitry ny Filoha Musharaf (izay malaza ratsy ankehitriny) tamin'ny Washington Post ny Meanderings , izay nalefany tsy nahy tany amin'ny tranonkalan'ilay Filoha mihitsy aza; i Teeth Maestro dia namoakaa lahatsoratra mikasika ny filan‘ny Filoha Bush mafy ny FIATOANA MBA HANDROANA nandritra ny fihaonana an-tampon'ny Firenena Mikambana (satria mbola tsy ‘tany’ izy taloha); Manadhady ireo vaovao mikasika ilay zava-nitranga tany Basra sy ireo miaramila tantsambo Britanika roa ny Suspect Paki; Manolotra ny fanehoankeviny tohina tamin'ireo daroka baomba vao haingana tao Lahore i Mina; ary manasongadina ny tantaran'ny Israeliana iray mpanohitra manana ny feon'ny fieritreretany izay tena mendrika ny ho vakiana i Windmills.
Ankoatra ireo voalaza etsy ambony ireo, tiako hasongadina ireo lahatsoratra maro ‘tsy miresaka vaovao‘ avy amin'ny blaogera Pakistaney izay mendrika ny ho jerena satria manampy handrava ny dridran'ingilo tsy misy fiovàna amin'ny fitorahana blaogy ara-politika nolazaina tetsy ambony. Somary mamelombelona kokoa ny blaogin'i Kay satria manolotra fanehoankevitra mikasika ny fiainana anatina sary telo izy; manezaka amin'ny resaka fitorahana blaogy an-tsary ny I AM MAKING IT HAPPEN (Atako izay hitrangan'izany) satria tena tsara tarehy ny fitambaran-tsariny; ary farany, manoratra mikasika ny fiakarana tendrombohitra ao avaratr'i Pakistana i Light Within, izay vakiteny mampifantoka .